कानुनीरुपमा यसरि छुट्ने छन् रवि ! - Sidha News
कानुनीरुपमा यसरि छुट्ने छन् रवि !
वीवीसी। देहत्याग गर्न बाध्य बनाउनेलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था भएपछि गएको एक वर्षमा नेपालमा देहत्याग दुरु त्साहनसम्बन्धी कैयौँ मुद्दा परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरेर २०७५ साउन १ गतेदेखि हालसम्म देहत्याग दुरुत्साहन सम्बन्धी १३१ वटा उजुरी परिसकेका छन्। गत वर्ष भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले देहत्याग गर्न बाध्य पार्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ।